Dhammaystirka Hoy la’aanta Dhallinyarada ee Tucson/Pima County - Wadashaqaynta Tucson Pima ee Joojinta Hoy La’aanta
Joojinta hoy la'aanta dhalinyarada ee Tucson / Pima County
Wadashaqeynta Tucson Pima ee lagu joojinayo hoy la'aanta (TPCH) wuxuu ku socdaa howsha looga hortagayo laguna joojinayo hoy la'aanta dhalinyarada ee Pima County. Si taas loo gaaro, waxaan ka shaqeyneynaa inaan sare u qaadno awoodda dhalinyarada ee doorashada go'aan qaadashada ee shakhsiga, abaabulka, iyo heerka nidaamka. Waxaan kugu casuumeynaa inaad nagu soo biirto adoo adeegsanaya emayl dhalinyaro@tpch.net.
TPCH waxaa loo xushay inuu kaqaybqaato labo talaabooyin qaran oo wax looga qabanayo hoy la’aanta dhalinyarada sanadka 2019. Kuwan waxaa ka mid ah HUD's Barnaamijka Bandhiga Bandhig-la’aanta dhalinyarada (YHDP) kaas oo looguna talagalay Tucson / Pima ee Sii Kordhinta ee daryeelka waxaa lasiiyay $ 4.558 milyan si loo dardar geliyo dadaallada bulshada ee looga hortagayo laguna joojinayo hoy la'aanta dhalinyarada iyo Wadada loo yaqaan Grand A Way Home America Challenge taas oo aan iskaashi la yeelan doonno bixiyeyaasha kaalmada farsamada ee federaaliga ah iyo sagaal beel kale oo ku baahsan dalka oo dhan si loo joojiyo hoy la'aanta ka dhexeysa dhalinyarada midabka leh iyo LGBTQ + dhalinyarada marka la gaaro 2022.
Waxaan aragnaa bulshooyinka iyo nidaamyada dhammaan Tucson / Pima County oo sababihii sababa la'aanta hoy la'aanta dhalinyarada loo carqaladeeyo oo xalaaladeedu ay yihiin kuwa joogto ah. Tani waxay u baahan tahay nidaamyo xag-jir ah oo lagu beddelo sinnaanta is-goyska iyo awoodda dhallinyarada. Nidaamyadan, dadka dhallin-yarada ah waxay kaxeeyaan xalal guriyeed shaqsiyadeed waxayna leeyihiin awood isku mid ah dhammaan heerarka go'aan qaadashada bulshada.
Mabaadiidaani waxay aasaas u yihiin shaqadayada si looga hortago loona joojiyo hoy la'aanta dhalinyarada. Waxaa lagu fidiyaa dhammaan howlaha loo yaqaan 'YHDP iyo Grand Challenge'.
Guriyeynta, waxbarashada, shaqada, caafimaadka, iyo natiijooyinka bulshada
Diiradda saar dadka nugul
Sinaanta jinsi iyo LGBTQ + ka mid ahaansho
Horumar Dhalinta Wanaagsan iyo Daryeel Faahfaahin
Taageero shaqsiyeed oo ay wadaan dhalinyaro
Is dhexgalka bulshada iyo bulshada
Hagaajinta Galitaanka Isuduwan
Hadafka 1 - Codka dhalinyarada iyo Waxqabadka: In laga hawlgeliyo dhalinyarada hogaaminta iyo hirgelinta tabaha looga hadlayo guri la'aanta dhalinyarada.
Hadafka 2 - Guriyeynta: Si loo wanaajiyo deganaashaha joogtada ah ee guryaha loona yareeyo hoy la'aanta soo noqnoqda ee dhalinyarada.
Hadafka 3 - Fursadda dhalinyarada: In la kordhiyo ka-qaybgalka waxbarashada iyo jiil dakhli oo ka mid ah dhalinyarada ay la soo deristay hoy la’aan.
Hadafka 4 - Caafimaadka: Si loo kordhiyo helitaanka iyo isticmaalka caafimaadka, dabeecadda, ilkaha, iyo ilaha fayoobaanta bulshada / shucuurta.
Hadafka 5 - Ka Hortagga Hoy La'aanta: In si wanaagsan loo garto isla markaana la caawiyo dhalinyarada halista ugu jirta inay la kulmaan hoyla'aan.
Hadafka 6 - Xogta iyo Gelitaanka Isuduwid: Si loo helo macluumaad iyo gelitaan isku duuban oo ah aalad lagu soo afjaro hoy la'aanta dhalinyarada.
Hadafka 7 - Sinnaanta: Si loo hubiyo in dhallinyardu ay la kulmaan helitaan caddaalad ah iyo fursado guul ah oo ka yimaadda nidaamka jawaab celinta hoy la'aanta dhallinyarada ee maxalliga ah
QORSHAHA XULASHADA BULSHADA
In kabadan 150 xubnood oo bulshada ah oo matalaya guryo kala duwan, shaqo, waxbarasho, caafimaad, caafimaad dhaqan, sharci, iyo dhallinyarro ay saameysay hoy la’aanta iyo deganaansha la’aanta guryuhu waxay isu yimaadeen inta u dhaxaysa Noofambar 2019 iyo Maarj 2020 si loo sameeyo qorshe dhameystiran oo isku dubbaridan bulshada si looga hortago iyo soo afjarida hoy la’aanta dhalinyarada.
Akhri qorshaha buuxa halkan.
U akhri cusboonaysiinta 2021 qorshaha halkan.
Guddiga Waxqabadka Dhallinyarada (YAC) waa koox wadareed hoggaamiyeyaal dhalinyaro ah, 24 jir iyo dhalinyaro ah, kuwaas oo leh waayo-aragnimo hadda ama tii hore ee guri la'aanta ama degenaansho la’aanta. Xubnaha YAC waxay ka ciyaaraan door muhiim ah hagida hirgelinta Qorshaha Isku-dubbaridan ee Bulshada, istiraatiijiyad horumarineed oo isdaba-joog ah, waana go'aan-wadaageyaal ku saabsan maalgelinta YHDP iyo mudnaanta qorsheynta.
Halkan guji si aad wax badan uga sii ogaato Guddiga TPCH ee Dhallinyarada.
(Haddii adiga ama qof aad taqaanid aad xiisayn kartaan codsashada YAC, fadlan la xiriir dhalinyaro@tpch.net).
Hawsha loo yaqaan 'YHDP' waa dadaal wada shaqeyn ah oo bulshada ka dhexeeya Waad ku mahadsan tahay shurakadeena bulshada ee aadka u liita shaqadooda si ay u hormariyaan uguna hormariyaan Qorsheheena Isuduwida ee Bulshada si looga hortago loona joojiyo hoy la’aanta dhalinyarada.
Ururka Caruurta Arizona
Arizona Caafimaad oo Dhameystiran
Waaxda Ammaanka Ilmaha ee Arizona
Waaxda Waxbarshada ee Arizona
Isbahaysiga Guriyeynta Arizona
Iskaashiga Dhalinyarada Arizona
Dugsiga Sare ee Magaalada
Xarumaha Caafimaadka ee Rio Rio
Rabitaanka Koonfurta Arizona
Iskuulka Indian Oasis School
U istaag carruurta Tucson
Kusoo dhaqaaq Cadaaladda
Dugsiga Diyaarinta Tucson
Degmo Dugsiyeedka Tucson
United Way of Tucson iyo Koonfurta Arizona
Dhallinyar Iskood U Leh
Isbahaysiga Caddaaladda Carruurta
Xarunta Caafimaadka ee Marana
Iskuulka Degmada Marana
Kuliyada Bulshada ee Pima
Degmada Pima JTED
Laybareeriga Dadweynaha ee Pima County
Iskaashiga Kahortaga Pima
Xarunta Maxkamadda Dhallaanka ee Pima County
PPEP Daryeelka Isku-dhafan
Koonfurta Arizona AIDS Foundation
LA SOCO QIIMAYNTA YAHIDP
TUCSON / PIMA DHALINYARADA QOYSKA GUDDOOMIYAHA MAAMULKA
TPCH waxay ku faraxsan tahay inay shaaciso doorashada lix mashruuc oo guryo cusub iyo adeegyo taageero leh oo lagu maalgeliyay Mashruuca Bandhigo-la’aanta Dhalinyarada ee Tucson / Pima. Isugeyn ka badan $ 4.1M laba sano gudahood, mashruucyadani waxay si weyn u kordhin doonaan helitaanka guriyeynta iyo adeegyada loogu talagalay dadka dhalinyarada ah ee la soo deristay hoy la’aan iyadoo diirada la saarayo hagaajinta sinnaanta jinsiyadaha, LGBTQ + isku xirnaan, iyo isku dubarid u dhexeeya waxbarashada, caddaaladda carruurta, xoogsatada, caafimaadka / hab dhaqanka caafimaadka , iyo nidaamyada kale ee bulshada ee saameeya dhalinyarada beesheena. Mashaariicdan ayaa bilaabmi doona deyrta / jiilaalka 2020.
GOODWILL METRO / MACLUUMAAD MACLUUMAAD
Ururka: Rabitaanka Koonfurta Arizona
Tirada Deeqda: $ 295,398
Description: Goodwill METRO / REC waxay la midoobi doontaa wacyigalinta asxaabta iyo u doodista ay soo gudbiyaan dhalinyarada khibrada u leh hoyla'aanta oo leh adeegyo waxbarasho iyo shaqo oo dhameystiran si loo wanaajiyo fursada dhalinyarada iyadoo loo marayo horumarka waxbarasho iyo shaqo xirfadeed. Adeegyada waxaa ka mid ah dugsiga sare / GED iyo diiwaangelinta kuleejka iyo kaalmada dhammaystirka, u diyaar ahaanta shaqada, tababarka shaqada, iyo isku xirnaanta shaqada.
DHAQANKA DARYEELKA DHALINYARADA & MASHRUUCA KALA DUWAN
Ururada: Adeegyadeena Qoyska iyo Jaamacadda Arizona Southwest Institute for Research for Women (SIROW)
Tirada Deeqda: $ 658,272
Description: Daryeelka Dhallin-yaradu wuxuu bixin doonaa taageerada guryeynta iyo adeegga maraakiibta isagoo ku xiraya dhallinta dhibaatooyinka iyo xulashooyinka guryeynta muddada-dheer, dheefaha guud, iyo adeegyada kale ee bulshada. Mashruucu wuxuu sidoo kale bixin doonaa maalgelin dabacsan si looga caawiyo dhalinyarada inay si dhakhso leh u xalliyaan khibradaha guri la'aanta iyada oo loo marayo dib-u-dhexgalka qoyska, guryaha martida loo yahay, iyo istiraatiijiyooyinka kale.
DHULKA IYO RASMI GURYAHA GUUD EE CRISIS
Ururada: Adeegyada Bulshada ee Old Pueblo (OPCS) iyo Koonfurta Arizona AIDS Foundation (SAAF).
Tirada Deeqda: $ 864,000
Description: Roodhida iyo Roses waxay bixin doonaan guryo ku meelgaar ah oo muddo gaaban ah oo si gaar ah loogu talagalay inay ka shaqeeyaan oo ay wax ka qabtaan baahiyaha gaarka ah ee LGBTQ + dhalinyarada waaweyn. Mashruucu wuxuu bixin doonaa jawi dib u soo celin ah oo aamin ah si looga caawiyo dhalinyarada inay ka bogsadaan dhaawacyada isla markaana u gudbaan dib u mideynta qoyska, adeegyada muddada-dheer ee guryaha, ama isku filnaanshaha.
CBI YHDP RAPID REHOUSING Mashruuca
Ururada: Buundooyinka Bulshada, Inc.
Tirada Deeqda: $ 819,492
Description: Mashruuca Raadinta Degdega ah ee CBI YHDP wuxuu bixin doonaa ilaa 36 bilood oo ah taageerada guryeynta joogtada ah oo leh iskucelcelis joogitaan 12 bilood ah. Adeegyada mashruuca waxaa ka mid ah kaalmada kirada iyo adeegyo dhameystiran oo taageero oo ay ka mid yihiin caafimaadka hab dhaqanka iyo adeegsiga maandooriyaha, maaraynta kiiska, waxbarashada iyo isku xirka shaqada, maareynta kiiska iyo taageerada guud ee dhalinyarada la soo deristay hoy la'aanta.
Mashruuca dib-u-dhiska cusub ee HOPE RAPID
Ururada: Adeegyadeena Qoyska
Tirada Deeqda: $ 966,509
Description: New Hope waxay bixin doontaa taageero guryeyn oo joogto ah illaa 36 bilood oo iskucelcelis ahaan joogitaankeedu yahay 12 bilood. Adeegyada mashruuca waxaa ka mid ah kaalmada kirada iyo adeegyada taageerada dhameystiran oo ay ku jiraan xirfadaha nolosha, isku xirnaanta shaqada iyo shaqada, la-talinta, maaraynta kiiska, iyo taageerada guud ee loogu talagalay dhalinyarada kelida ah, lammaaneyaasha da'da yar, iyo barbaarinta dhalinyarada waaweyn.
KHUDBADAHA GUURKA GUUD EE MAAMULKA GUUD
Ururada: Iskaashiga Bulshada ee Koonfurta Arizona
Tirada Deeqda: $ 504,000
Description: Guriyeynta Kaalmada Joogtada ah ee Kumeelgaarka ayaa bixin doonta kaalmo kiro oo aan xadidanayn iyo adeegyo taageero leh oo loogu talagalay dhalinyarada naafada ah iyo isku xirnaanta baahiyaha adeeg ee taageero. Mashruuca waxaa ku jira hoy, caafimaad isku dhafan iyo daryeelka hab dhaqanka, waxbarashada iyo adeegyada shaqada, maaraynta kiiska, iyo adeegyo kale oo loogu talagalay dhalinyarada naafada ah.